Ny tena sary voalohany an'ny HTC One A9 dia miseho | Androidsis
Ilay mpamokatra HTC dia manana hetsika hotontosaina anio any Japon ary raha ny loharanom-baovao akaiky ny orinasa dia afaka manambara ny fantsona vaovao fanta-daza sy honohono, ny HTC One A9. Afaka nahita ity fitaovana ity izahay tato ho ato satria efa navoaka matetika izy io ary nahasarika ny sainay ireo fivoahana ireo.
Nahasarika ny sainay izy ireo noho ny endriny ary izany, ny terminal vaovao an'ny orinasa miorina any Shina, dia manana endrika mitovy amin'ny iPhone ankehitriny. avy amin'ny Raha toa ka fitaovana avo lenta na antonony izany, ankoatran'ny fanivanana ireo sary tena izy voalohany, dia navoakan'ny pikantsarin'ny zana-kaontiny ihany koa ilay fampiharana AnTuTu malaza.
Raha mijery ny sary iresahantsika isika dia hitantsika ny hananan'ny fitaovana a Efijery 5 inch ambanin'ny famaritana avo lenta (1920 x 1080 teboka). Ao anatiny no ahitantsika ny processeur novokarin'i Qualcomm, ny Snapdragon 620 ary eo akaikin'ity SoC ity dia GPU Adreno 405 no mifameno, Fahatsiarovana RAM 3 GB ary tahiry anatiny 32 GB.
Mikasika ireo toetra manan-danja hafa hitantsika ny fomba, ny fakantsary lehibe miorina ao ambadiky ny fitaovana dia ho 13 Megapixels miaraka amina flash taratra roa, raha 5 MP kosa ny fakan-tsary eo alohany. Ho avy miaraka ilay terminal Android 6.0 Marshmallow, ka ity terminal ity dia azo aseho aorian'ny fampisehoana ny Nexus vaovao sy ny fanavaozana farany ny rafitra fikirakirana finday Google.
Tsy dia misy resaka firavaka firy. Tsy fantatsika raha nesorina i HTC ary hitantsika fa ny endrik'ilay iPhone 6 no endrika tsara indrindra ho an'ny terminal manaraka. Saingy mazava fa raha mametraka fitaovana iray eo akaikin'ny iray hafa isika dia tena mitovy. Mahaliana izany satria, mahazatra antsika ny mahita ireo mpanamboatra sinoa izay tsy amin'ny ambaratonga voalohany, manao klone, kopia na fakana fitaovana miaraka amina endrika mitovy amin'ny vokatra Apple ihany. Saingy amin'ity indray mitoraka ity dia mpamokatra ambaratonga voalohany izay manamboatra fantsona izay raha tsy noho ny valinteny voalohany ao ambadik'izany dia mety hieritreritra isika fa klone sinoa hafa io.
Na izany na tsy izany, nikasa ny hampiseho an'ity vokatra ity i HTC anio, noho izany dia hitandrina isika ny amin'izay hitranga any Japon sy San Francisco, satria omanina tolakandro be atao ny momba ireo zava-baovao misy amin'ny Android manaraka. Ho hitantsika raha mamoaka vokatra voafintina sy tsara asongadina amin'ny vidiny mirary ho an'ny mpanjifa ny HTC. Izany dia hahatonga ny mpampiasa hatoky ity mpanamboatra malaza ity indray, izay tsy mandalo ny fotoana tsara indrindra amin'ny tantarany ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » HTC » Miseho ny sary tena izy voalohany an'ny HTC One A9
Io bokotra ambany mahatsiravina io !!! Enga anie tsy izany no maodely farany !!
Ry malala ... Alohan'ny hiresahana ny "Copies in Design" dia tsy maintsy tadidintsika fa ny HTC dia nanolotra an'ity na ity famolavolana hafa ity talohan'ny nataon'i Iphone, mety ho marina ny milaza fa naka tahaka avy amin'ny HTC ny Iphone ..
Joshua Vicente Hoyos dia hoy izy:
Valiny tamin'i Josu Vicente Hoyos
Raha ny fahitako azy dia hadisoana htc aho, fa ny finday ny endriny toa somary marokoroko ary habaka be no very eo anelanelan'ny bokotra noeritreretiko, tsy haiko raha mpamaky ny rantsan-tànana, ny marika htc ary ny bokotra virtoaly. ataovy ny hadisoan'ny M rehetra afa-tsy ny m7 izay tsy namoy io habaka io teo amin'ny efijery ary toa tsara tarehy ny hevitrao